Ahoana no Hihaona (Shinoa) ry Zalahy ao Shina ny Mpanoratra. Mpandeha. Dite Mpisotro
Jocelyn eo amin’ny Fitenenana Shina vao namaly ny fanontaniana avy ny taona iray tandrefana vehivavy manontany tena hoe ahoana no hihaona Shinoa ry zalahy ao Shanghai. Na, ny marimarina kokoa, Jocelyn tsy t tena mamaly izany ny tenany, raha izy no t antoka. Raha tokony ho nanontany izy hoe Shinoa Shanghai lehilahy (izay manambady vahiny iray) ny fomba hanaovana izany. Ny valiny dia tsara, raha tsy tad generic, sy tonga saina aho zavatra. izany no zavatra raha ny marina aho mahafantatra zavatra mikasika azy. Izaho ve ohatra, dia ny Shinoa ry zalahy nandritra ny roa taona ary ankehitriny aho dia manao izany mora foana. Mihevitra ny olona rehetra misy solo maro ry zalahy ao Shina ary mazava ho azy fa fihaonana ny lehilahy tokony ho mora. Saingy raha ny marina, ny s tsy ary maka kely ny fomba fanao ary ny mahalala-fomba. Ny fototra kely: tonga tany Shina manambady, ary azo antoka fa tsy nihevitra velively fa ny fifandraisana amin’ny hafa ry zalahy dia mety. Izaho dia tsy dia ny iray manana mavo ny tazo. Fa avy eo dia tonga ny fisarahana am-panambadiana aho ary nahita ny tenako iray ary, taorian’ny volana vitsivitsy, vonona ny hahazo indray ny soavaly. Ary izaho ve dia efa tena kely ny fahombiazana, ny fiarahana ry zalahy miainga avy — amin’ny isan-karazany ny asa. Ny zavatra aho TSY mitady ny fifandraisana matotra aho rehefa mendrika kely aina mba ho amin ny tenako aho ary tsy ho ao an-tanàna ho ela kokoa noho izany ny fahazoana mandray anjara amin’ny zavatra lalina dia t marina, amin’izao fotoana izao. Ihany koa aho fa tsy liana amin’ny fiarahana vahiny na mampiaraka Shinoa ry zalahy fa miteny anglisy. Aho tarehimarika aho ao Shina, noho izany dia tokony hanaiky ny fiainana eto tanteraka. Izaho moa t tanteraka nitondra azy avy, fa tsy t mitady azy. Koa, raha ny tena aho sariaka aho karazana nentim-paharazana ao amin’ny fahatsapana fa tsy hanao ny dingana voalohany. Izaho miandry ry zalahy mba hifandray ahy voalohany, ary mampiseho ny tombontsoa. Raha izahay ve efa niady hevitra nandritra ny fotoana kelikely aho mba hilaza zavatra momba ny fandraisana azy somary lavidavitra kokoa, nefa tsy tena azo ny voalohany ny hanoroka azy ireo na inona na inona. Noho izany, tsy hiandrasana ela intsony, eto, dia ny kely tari-dalana momba ny fomba hitsena ny Shinoa ry zalahy ao Shina. (Neny, i dada dia mety ho tianao ny mamaky intsony eto. Ny) trano fisotroana Fikambanana raha tsorina dia ny ratsy indrindra ny toerana mba hitsena ny olona. Na raha toa ianao vao mitady hook-up tena ratsy toerana. Ianao dia hahita ny vehivavy, ny olana lehibe indrindra ao amin’ny fivoriana Shinoa ry zalahy dia ny foreignness. Misy be dia be ny hevitra raiki-tampisaka momba ny zavatra avy any ivelany ny vehivavy te-ao anatin’izany ny, afa-tsy ny manan-karena ry zalahy, afa-tsy ny avy any ivelany ry zalahy, ihany ry zalahy fa afaka miteny ny fiteny malagasy, sns. Tena tsara tarehy be ny lehilahy rehetra koa dia ho saro-kenatra ny hanatona anareo. Na dia misotro ranon-javatra kely herim-po sy mangataka anao mba hanatevin-daharana azy ireo tamin’izany ny latabatra, fa dia izay izany dia mety hijanona. Mba hahazoany na dia milaza zavatra toy, ianao re ka tsara tarehy, ary inona-tsy izany, dia tampoka hiala. Ny hany ry zalahy fa mety ho maharitra ary mandroso matetika ny karazana douchey manan-karena ireo izay mieritreritra fa afaka hividy ianao na na inona na inona. Tsy ny karazana toy izany. Ohatra, nisy fotoana aho amin’ny club mandihy ny ass eny, ary tratra ny sasany ry zalahy maso. Mandritra ny hira vitsivitsy izahay nandihy amin’ny tsirairay, mandraoka samy hafa ny tanana, nihomehy sady miala voly. Rehefa afaka kelikely izy motioned ho antsika mba haka aina ary dia nandeha ny sasany latabatra akaiky ny namana. Hitako iray ny (vahiny) bandy namana nanoroka ankizivavy Shinoa. Ny lehilahy aho amin’ny mijery azy ireo ary niteny hoe: Izahay.
Avy eo izy dia nanampy hoe, Fa izaho ihany koa no kely saro-piaro. No lehibe kokoa na dia bebe kokoa ianao saro-piaro? Nanontany aho miezaka hahatakatra ireo tena mifangaro hafatra izy no nanome ahy. Lehibe kokoa, hoy izy. Farafahakeliny dia namihina ahy izy raha niala tao izy, mihoatra noho ny tena ry zalahy dia hanao. Namana Namana heveriko fa raha toa ianao ka mitady ny fifandraisana maharitra ity no lalana haleha. Lazao ny Sinoa namany (indrindra fa ny bandy namana) fa ianao mitady olona, ary izy ireo dia azo inoana fa mahafantatra, tahaka, ry zalahy eny an-tampon ny loha. Amiko manokana, mahatsapa aho fa somary hafahafa kely momba ity fomba ity. Efa be dia be ny lahy Sinoa namany ary raha miezaka izy ireo mba hametraka ahy, tsapako kely toy ireo pimping ahy avy na zavatra. Ary inona no mitranga raha ny ahy sy ny namako namana mahazo miara. Inona no namako hoe ny lehilahy? Inona no ny bandy hoe mba namako momba ahy? Izany fotsiny toa somary hafahafa ny ahy ary mino aho fa nihaona ry zalahy avy ny tenako. Fa lazaina, izaho no hihaona vitsivitsy ry zalahy mifototra amin’ny namako’ ny tolo-kevitra ity ny vanin-taona mafana. Na inona na inona niasa avy, fa izy ireo no mahasakana avy mba ho tena tsara toy ny namako nahafantatra ny karazana lehilahy izay tiako. Fampiharana Izany dia ny zava-miafina, ary ny lalana izay mihaona amiko ry zalahy. Amin’ny WeChat dia hoe ny tsara indrindra fampiharana ny tsy mifampiresaka, fa ho fivoriana ny olona. Misy mijery ny manodidina endri-javatra, izay afaka miala eo, ary izany dia mampiseho anao ny olona rehetra ao anatin’ny km manodidina izay ihany koa ny mampiasa ny mijery ny manodidina. Afaka hanivana izany mampiseho fotsiny ny anareo ry zalahy, ary afaka mahita ny elanelan’ny dia iray metatra ny mizana. (Na dia tsy marina foana. Ny namana izay dia mipetraka tsara manerana ahy dia voasoratra ao amin’ny metatra izy.) Toy ny efa nolazaiko, nataoko miandry ry zalahy mba hifandray ahy. Amin’ny WeChat dia afaka mandefa hafatra ianao, ary ny s anjaranao ny manapa-kevitra raha hanaiky izy ireo na tsia. Izaho tsy hiresaka amin’ny na iza na iza dia tsy misy tena mombamomba ny sary (maro loatra ry zalahy mampiasa pics ny fiara na ny alika na ny hafa adala zavatra), ary matetika aza t mamaly ny olona izay manoratra amiko amin’ny teny anglisy. Ny antony izany no fomba tsara indrindra mba hihaona ry zalahy no app manome ny shyer ry zalahy herim-po. Izy ireo aza t maintsy miresaka ho anao mifanatri-tava sy raha toa ianao nitodika azy ireo na tsy hiraharaha azy ireo, ny s tsy mba lehibe. Izy ireo dia afaka ihany koa hizaha toetra anareo mba hahita raha toa miteny Sinoa. Izaho ihany no ampiasaina ity fahasahaza ity indray mandeha tao an-tsekoly (satria manodidina eto dia ny ankamaroany mpianatra aho, ka tsy vonona ny daty ny mpianatra) ary nihaona ny kely volo. Matetika aho no mampiasa izany ao Shanghai ary Hangzhou amin’ny tena tsara ny vokatra. Tsy maintsy ho tad handroso, toy ny te hilaza ve ianao mivory, toy ny sasany izay ry zalahy dia hiresaka fotsiny ho an’ny andro sy ny andro ary tsy milaza ny daty, fa ny s mora kokoa ilay rehefa mampiasa ny fampiharana. Fa niady hevitra ho an’ny andro iray na roa voalohany no tena zavatra tsara toy izany, dia ahi-dratsy ny weirdos. Ohatra (ho zava-dehibe, neny sy i dada raha toa ianao no mbola mamaky izany, atsaharo ankehitriny), indray andro aho tao Shanghai mifampiresaka amin’ny lehilahy izay toa tanteraka ara-dalàna sy ny tsara. Izahay no niady hevitra sy ny eny mandritra ny andro fotsiny karazana ny ara-dalàna izay avy, inona no tianao atao, zavatra. Ny zavatra nandeha tsara, ary tsy nahazo miaraka tsara. Avy eo, manodidina ny pm izy naniraka ahy ny sary. Izany dia sarin’, um, tsara, dia ny sela.
Ny sela mando
Avy eo izy nandefa kokoa pics, mandiso, tsara, fomba ny sela nahazo mando. Aho amin’ny bunch ny namana, ary mazava ho azy dia nampiseho azy ireo, ary niafara tamin’ny manana mahatsikaiky fotoana izany. Saingy tsy misy fomba aho, dia handeha mandrakariva hitsena azy rehefa afaka izany. Izany ihany koa no mahatahotra fampiharana ny mampiasa rehefa mandeha. Ianao don t na dia mila tsy te-hahita ny daty, maro ny olona no vonona fotsiny ny mandehandeha, ary hampiseho aminao ny tanàna niaviany. Efa masaka an-trano sakafo, manokana tours, ary nahazo be dia be ny info momba ny toerana vaovao satria ny fivoriana ny olona amin’ny fampiharana izany. Azonao atao ihany koa ny mampiasa fampiharana ity mba ho namana sy mihaona ny olona eo amin’ny manodidina. Tsy afaka hiteny fa ampy tsara ny zavatra momba ny fampiharana izany. Misy hafa fampiharana antsoina hoe Momo, nadika ho Hey Olon-kafa. Izany dia hook-up fampiharana ary tsy ny zavatra tsara raha toa ka mitady ny fifandraisana lehibe na fotsiny namana. Fa mety ho tsara raha toa ianao ka ao amin’ny toerana vaovao, ary te-hivoaka sy mihaona ny olona mbola don t mahafantatra olona ao amin’ny faritra. Fotsiny ho nampitandrina. Raha manana fampiharana izany eo amin’ny telefaonina aza t mampideradera izany. Ny s ny iray tamin ireo zavatra izay olona rehetra mahafantatra ny momba ary raha Shinoa ny olona hahita izany eo amin’ny telefaonina, izy no hitsara anao (nihevitra izy ireo, mazava ho azy fa fantatrao momba azy io koa, ary angamba izany, ny s fotsiny ny tsara indrindra mba hitandrina izany ho zava-miafina). Tahaka ny WeChat dia hasehoko anao ny olona eo amin’ny faritra avy hatrany izay ihany koa ny mampiasa ilay rindrambaiko. Afaka dresaka sy mandamina ny fivoriana. Ary mazava ho azy, raha mihaona amin’ny olona amin’ny alalan’ny fampiharana hilalao azy soa aman-tsara. Rehefa mihaona amin’izy ireo ho voalohany hanao izany mandritra ny andro amin’ny vahoaka faritra, tahaka ny valan-javaboary, ny na miantsena an-dalambe na zavatra. Aza t lazao azy ireo izay velona, na hihaona aminy any aho. Fotsiny hilalao azy soa aman-tsara sy ny s tsara rehetra. Aho ve nihaona iray taonina ny olona amin’ny alalan’ny fampiharana ary na oviana na oviana indray manahy ny amin’ny fiarovana ahy, na nanana olana. Fa izaho ihany koa no manan-tsaina momba ny fotoana izay hanatanterahana azy. Ny Fiarahana amin’ny aterineto Izany no zavatra mbola t niezaka mbola (na raha toa ianao, ry mpamaky te ahy, aho, dia tsy ho vonona.) Misy be dia be ny toerana fa dia amin’ny teny anglisy sy ny ankamaroan’ny olona Sinoa, toy ny any Azia friend finder ary vitsivitsy AMFW (Aziatika lehilahy vahiny vehivavy) ny vohikala ary koa ny sasany ihany any Shina ireo toy ny personals. Fantatro fa misy namana izay efa fahombiazana amin’ny azy ireo, fa izaho kosa ve tsy nampiasa azy ireo ka tsy t fantatro. Azo antoka fa, toa tahaka ny fomba tsara aza.
Ka s ny toro-hevitra
Mazava ho azy, efa nihaona vitsivitsy ry zalahy mifanatri-tava, toy ny ao amin’ny dite ny toeram-pivarotana, na toeram-pisakafoanana (lehilahy Iray nanatona ahy nandritra ny fisotroana kafe indray mandeha, ary hoy ny fialan-Tsiny ahy, dia mampahatsiahy ahy ny any ivelany mpampianatra, ary izaho dia tahaka ny damn, tsara angady-up tsipika buddy.) fa mitranga fotsiny, ary izany dia tena ny lehilahy, ka tsy afaka miantehitra izany. Raha te-hihaona ry zalahy tokony ho be herim-po ary vonona ny hametraka ny tenanao avy misy kely. Ary tsarovy, izy dia mety x kokoa natahotra miresaka aminao, tsy ny zazavavy fa ny avy any ivelany ny vehivavy, avy eo dia miresaka aminy. Tiako ity lahatsoratra ity. Ny bandy mandefa sary ny sela ara-bakiteny nahatonga ahy nihomehy mafy. Izaho tsy t hoe misy vohikala iray antsoina hoe AMFW. Lahatsoratra lehibe ho foana.
Ny sela lehilahy lasa malaza ao amin-namana izany no any fa ny alina. Isika dia hiantso azy JN, N dia ny mosara sy ny J dia ho, tsy ho voafitaka. inona no AO amin’ny napkin. Hoy izy nanohy izany mba hanoratra ho ahy nandritra ny herinandro vitsivitsy aho fa tsy t valiny. Fantatro fa afaka hamafa azy, fa marina izy, ka ny mampihomehy sy nitondra fifaliana lehibe tokoa ho ahy sy ny namako aho tsy afaka hanao izany
← Inona no tsara indrindra an-tserasera niaraka vohikala ao Shina. Video Mampiaraka
Izay Mihaona Tokana Vehivavy Shinoa ny vaovao Shinoa vadiny tany am-Boalohany sy ny namany sary momba ny Vehivavy Shinoa ary ny Tovovavy Shinoa →